समाचार बैंक/बीमा समाज
मुखिया गाउँको पीडा–२
जग्गा दियो–ऋण लियो, पैसा खायो–जेल पठायो शम्भु केसीले यसरी फसाए गाउँलेलाई
शिव सत्याल काठमाडौं, १६ मंसिर
बनेपाको बुडोलका स्थानीयलाई शम्भु केसीले बैंकिङ कसुरको अभियोगमा जेल पठाउने माहोल सिर्जना गरे । मुखिया गाउँको नामले परिचित केसी टोलका सोझा, सिधा गाउँलेलाई केसीले यसरी फसाएका रहेछन् ।
शम्भु केसीले जग्गा पास गरिदिने र उनीहरूकै नाममा ऋण झिकेर आफैँले प्रयोग गर्नेमध्येका एक हुन्, अनिल थापा । उनी अहिले पाटन उच्च अदालतको आदेशले धुलिखेल जेलमा कैदी जीवन गुजारिरहेका छन् ।
अनिल भर्खर ११ कक्षामा पढ्दै थिए । फुटबलका सौखिन । काभ्रे क्याम्पसमा प्लस टु अध्ययन गर्दै थिए । यस्तैमा उनको भेट शम्भुका छोरा भूषणसँग भयो ।
भूषण पनि त्यही कलेजमा पढ्थे । हुन्डाई कम्पनीको आइ–टेन गाडी लिएर कलेज जान्थे भूषण । अनिलसँग फुटबल खेल्थे । कलेजमा उनको राम्रै रवाफ थियो ।
‘पूर्वयुवराज पारसले गाडी असाध्यै छिटो दौडाउँछन् भन्ने सुनेको थिएँ, पारस निकै छिटो गाडी हुइँक्याउँथे भने पारसपछि त भूषण नै थिए होलान् छिटो कुदाउने । कलेज राजनीतिमा पनि सक्रिए थिए’, भूषणका सहपाठी सम्झन्छन् ।
भूषण क्यापिटल रेमिटको ‘ठूलै मान्छे’ भन्ने हल्ला थियो कलेजमा । तर, क्यापिटल रेमिट उनकै भिनाजु पवनकुमार कार्की प्रबन्ध संचालक रहेको क्यापिटल मर्चेन्टकै भगिनी कम्पनी थियो ।
अनिलका बुबा गाडी ग्यारेजमा काम गर्थे । आमा रातभर स्विटर बुनेर घरको गर्जाे टार्ने प्रयत्न गर्थिन् । अनिललाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) बनाउने धोको थियो घर परिवारको ।
‘मैले पढेकी छैन, आफूले नपढे पनि छोरालाई सीए बनाउँछु भन्ने ठूलो धोको थियो । ५ लाख ऋण खोजेर छोरालाई सीए पढ्न भारत पठाएकी थिएँ । शम्भुको छोराले फसाएछ । सीए पढ्दै गरेको छोरा, विहे गरेको केही महिनापछि नै जेल प¥यो’, अनिलकी आमा सुधाले विरह पोखिन् ।
शम्भुका छोरा भूषणको नाममा मेगा सप्लायर्स नामक कम्पनी दर्ता रहेछ । भूषणले आफू ६ महिनाका लागि दुबई जानुपर्ने भएको कथा बुनेछन् । ६ महिनामा आफू आएपछि कम्पनी फेरि आफ्नो नाममा फिर्ता गर्ने तर यहाँ व्यापार, व्यवसाय गरिरहनुपर्ने भएकाले यहीँ बस्ने व्यक्तिको नाममा कम्पनी हुनुपर्ने बताएछन् अनिललाई ।
भूषणको योजनाअनुसार नै अनिलको नाममा सो कम्पनीको नामसारी गरिएछ । अनिल भूषणका कुरामा फकिएछन् । बाबुआमालाई पनि भनेनछन् । भूषणले भनेअनुसार नै आन्तरिक राजस्व कार्यालय जगाती गएछन्, आफ्नो सप्लायर्सले डण्डी, बालुवालगायत बेच्ने हो भनेछन् । र, अनिललाई भूषणले एक बुक खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएछन् ।
अनिलको नाममा मेगा सप्लायर्सको नामसारी भएपछि ३ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण झिकिएछ– क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सबाट । ११ कक्षामा पढ्दै गरेको १८ वर्षे किशोरको नाममा कम्पनी, ऋण प्रवाह ३ करोड २० लाख रुपैयाँ !
अनिलको कम्पनीलाई शम्भुले खोजेका व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा धितो राखिएको रहेछ । आफूलाई धितो दिने व्यक्ति अनिलले चिनेका पनि थिएनन् । दुर्भाग्य ! ऋण अपचलनको अभियोगमा अनिल अहिले धुलिखेल जेलमा छन् ।
केदार केसी, शम्भु केसीका नजिकका पारिवारिक सदस्य हुन् । घर पनि नजिकै छ । केदारसँग शम्भुले जग्गा हदबन्दीकै कारण देखाएर जग्गा लिइदिन आग्रह गरे । शम्भुले केदारको नाममा कहाँको कति जग्गा पास गराए भन्ने केदारलाई थाहै भएन । आफ्नै गाउँको, आफ्नै नजिकको भाइ बन्धुले गरेको आग्रह केदारले नकार्न सकेनन् ।
शम्भुले केदारको नाममा जग्गा पास गराए । जग्गा पास गराएपछि केदारकै नाममा कम्पनी खोल्न आग्रह गरे । केदारले त्यो पनि माने । र, केदारको नाममा ऋद्धिसिद्धि राइस मिल नामक कम्पनी खोलियो ।
‘हदबन्दीबाट बच्न जग्गा लिइदिनुप¥यो भने, हुन्छ भनेँ । पैसाको लालच देखाएनन्, शंका गरिनँ । कम्पनी खोलौँ, म आफैँले चलाउने हो भने, त्यो पनि मानेँ । उनको बैंक डुबेछ, मेरो नाममा १० करोड रुपैयाँ ऋण झिकिएको रहेछ । अदालतमा मुद्दा परेछ, मैले हारेछु । पत्रिकामा मेरो नाम पनि आएछ, पछि प्रहरी मलाई पक्रन घरमा आयो अनि पो थाहा पाएँ’, केदारले भने ।
प्रहरीबाट जसोतसो जोगिँदै थिए उनी । उनीमाथि यस्तो बज्रपात आइलागेको थाहा पाएको ३ महिनापछि केदार बेहोस भए । गंगालाल हृदयरोग केन्द्र लगियो । ६० वर्ष कटेका केदारको मुटुमा समस्या देखिएछ । गंगालाल अस्पतालमा उनको ‘ओपन हार्ट सर्जरी’ गरियो । ‘खाई न पाई’को १० करोड रुपैयाँ ऋण अपचलनको अभियोग लागेका केदार राज्यको नजरमा अहिले ‘फरार’ व्यक्ति हुन् । पाटन उच्च अदालतले उनलाई कैद सजायको फैसला गरेको छ ।
मन्दिरा केसी र उनका श्रीमान्
मन्दिरा केसीको अवस्था अझै दयनीय छ । मन्दिरा केसी र उनका श्रीमानको नाममा पनि शम्भुले जग्गा हदबन्दीको कारण देखाउँदै जग्गा पास गराए । कम्पनी खोलिदिए । ऋण झिके । रकम आफैँले चलाए । श्रीमान्–श्रीमतीलाई नै ऋणी बनाए ।
मन्दिराका श्रीमान् स्व. हरिशचन्द्र केसी भेटेरीनरीमा जागिर गर्थे । पेन्सन पाक्न २ महिनाजति थियो । शम्भुले हरिशचन्द्रको नाममा सुशोभन डेभलपर्स नामक कम्पनी खोलिदिएका थिए । र, सुशोभनकै नाममा २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ ऋण झिकेका थिए । तर, ऋण रकम र कम्पनीको नाम यही नै हो भन्नेमा मन्दिरालाई यकिन छैन ।
हरिशचन्द्रले कर्जा अपचलन गरेको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतले दोषी करार ग¥यो । हरिशचन्द्र पक्राउ परे । पक्राउ परेको ४ दिनपछि नै उनी बिरामी परे । धुलिखेल अस्पतालमा भर्ना गरियो । हरिशचन्द्रलाई अल्सर भएछ । उपचार हुन सकेन । ७ महिना अस्पतालमा थलिएर हरिशचन्द्रको प्राण गयो ।
हरिशचन्द्रले यो संसारबाट बिदा लिए पनि शम्भुको जालझेलबाट उनकी श्रीमती मन्दिरा मुक्त हुन सकिनन् । मन्दिराको नाममा पनि शम्भुले घराना डेभलपर्स नामक कम्पनी खडा गरेर ३ करोड रुपैयाँ ऋण झिकेका थिए ।
पाटन उच्च अदालतले मन्दिरालाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । उनी प्रहरीको पक्राउबाट हालसम्म जोगिएकी छन् । कुन दिन समात्ने हो, थाहा छैन । सामान्य गृहिणी मन्दिरालाई आफ्ना २ सन्तान कसरी पाल्ने भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने अर्कातिर राज्यको नजरमा फरार व्यक्तिको रूपमा भागेर बाँच्नु परेको पीडा उत्तिकै छ ।
प्रकाश केसी र शम्भु केसीको पुरानो घर एउटै छ । घरभित्र पस्ने र निस्कने ढोका भने फरक छ ।
प्रकाश शम्भुको पोल्ट्री फर्ममा नै काम गर्थे । उनकी श्रीमती मन केसी सामान्य गृहिणी । बस्तु भाउ पाल्ने गथ्र्याे प्रकाश परिवार ।
शम्भुले प्रकाशको नाममा पी होम डेभलपर्स नामक कम्पनी खोलिदिएछन् । र, सोही कम्पनीको नाममा ‘५ करोड चानचुन’ ऋण झिकेछन् । ऋण शम्भुले नै चलाए । अरूलाई जस्तै प्रकाशलाई पनि पाटन उच्च अदालतले ऋण अपचलनको अभियोगमा जेल सजाय सुनायो ।
प्रकाशको नामको ऋण तिरिसकियो भन्ने पनि छ तर प्रकाश जेलमै छन् ।
‘यति धेरै ऋण छ रे ! हामीले खाएको, लाएको केही होइन । उहाँ (श्रीमान्) जेलमा हुनुहुन्छ, मेरो कमाइ केही छैन । भूकम्पले जीर्ण पारेको घर बनाउँन सकिएको छैन । हाम्रो यस्तो अवस्था भयो’, प्रकाशकी श्रीमतीको उदासी प्रकट भयो ।
प्रकाशका छोरा सुदीप गाउँमा अहिले सन्नाटा छाएको र चाडपर्वमा पनि कुनै रौनक नआउने बताउँछन् ।
आनन्द थापा पनि बनेपामा नै आनन्द पोल्ट्री फर्म चलाउँथे । आनन्दले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र लक्ष्मी बैंकबाट गरी करिब ३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका थिए ।
व्यवसाय गरिरहेका थिए । पोल्ट्री व्यवसाय गर्ने, आफ्नै गाउँका शम्भु केसीसँग आनन्दको चिनजान नहुने भन्ने कुरै भएन । यस्तैमा शम्भुले एक दिन आनन्दलाई भने– ‘मेरो नाममा जग्गा धेरै भयो । हाउजिङ व्यवसाय गर्न बैंकिङ क्षेत्रबाट ऋण लिन मिलेन, तिम्रो पोल्ट्री फर्म छ । त्यसबाट कृषि ऋण लिन सजिलो हुन्छ । ऋणको साँवा व्याज म तिर्छु, तिम्रो फर्मबाट ऋण झिकौँ ।’
शम्भुको पारिवारिक पृष्ठभूमि, समाजले उनीप्रति गर्ने व्यवहार, एउटै गाउँ र जोडिएको व्यवसाय भएका कारण आनन्दले उनको कुरा अस्वीकार गर्न सकेनन् । घरमा कसैसँग सल्लाह पनि गरेनन् । र, शम्भुले उनको फर्मको नाममा लिन लागेको ५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋणका लागि सहमत भए । कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
तर, शम्भुले ऋण तिरेनन् । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स समस्याग्रस्त भयो । ऋण दुरूपयोगमा शम्भुको संलग्नता डरलाग्दो आकारको देखिएको राष्ट्र बैंकले फेलापा¥यो । कर्जा अपचलनको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतको आदेशले आनन्दमाथि पनि जेल सजाय तोकियो । उनी पनि अहिले धुलिखेल जेलमा छन् ।
‘आफ्नै २ वटा पोल्ट्री फर्म थिए, बैंकबाट ३ करोडजति ऋण झिकेको थियो । फर्म चलाउने छोरा जेल प¥यो । फर्म बन्द भयो, बैंकले ऋण तिर्न ताकेता ग¥यो । पैसा थिएन, अलिकति खेत थियो, त्यही बेचेर बैंकको ३ करोड ऋण तिरेँ । अब हामीसँग केही छैन, छोरा जेलमा छ, नातिको बास पाटीमा हुने भयो’, आनन्दकी आमा अबला थापाले गला अवरुद्ध पार्दै पीडा सुनाइन् ।
राजेश केसीको दशा एसएलसी सक्नेवित्तिकै सुरु भयो । राजेशले भर्खर एसएलसी सकेका थिए । शम्भु केसीले उनलाई लमजुङ घुम्न लगेछन्, आफ्नै गाडीमा ।
राजेश र शम्भु एक रात लमजुङ सँगै बसेछन् । त्यहीँ फकाएछन् राजेशलाई शम्भुले । र, राजेशको नाममा श्रीकृष्टा चिया उद्योग दर्ता भयो ।
‘भर्खर एसएलसी दिएको थियो, मोबाइल किन्देको पनि थिएन, आमा (हजुरआमा)को मोबाइलमा फोन गरेर शम्भुले बोलाएछन् । लमजुङ पुगेछन् । फर्केर आउँदा पो शम्भुले भनेअनुसार चिया उद्योग खोल्न हस्ताक्षर गरेर आएँ भन्यो छोराले’, राजेशकी आमा रीता केसीले भनिन् ।
राजेशको नाममा दर्ता भएको कम्पनी श्रीकृष्टा चिया उद्योगको नाममा शम्भुले ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ऋण झिके । शम्भुले नै चलाए । तर, बैंक ऋण अपचलनको दोष भने राजेशमाथि लाग्यो । उनलाई पनि पाटन उच्च अदालतले दोषी ठहर ग¥यो ।
राजेशका बाबुआमाको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । बाबु हेलम्बु यातायातको टिकट काउन्टरमा काम गर्थे । आमा ज्याला मजदुरी गरेर सघाउँथिन् । तर, ऋण धन जसोतसो गरेर बाबुआमाले राजेशलाई इन्जिनियरिङ पढाए ।
पढाइ सिद्धिनेवित्तिकै राजेशमाथि प्रहरीको निगरानी बढ्यो । राजेश अहिले फरार छन् ।
‘त्यत्रो खर्च गरेर पढायौँ, टोपी लगाउन (इन्जिनियरिङ सक्न) पाउँदैन कि भन्ने डर थियो । टोपी त लगायो, लुकेर बाँच्नु परेको छ । कहाँ छ, के गर्दै छ भन्ने थाहा छैन । ज्यान चैँ फाल्दिनँ ममी भनेर एकचोटि भनेको थियो । त्यसैले ज्यूँदै होला भन्ने आस छ’, यस्तो सुनाउँदै गर्दा आमा रीताको आवाज भासिँदै गयो ।
रीतालाई अर्काे आर्थिक समस्या पनि आइलाग्यो । कसैले उनलाई ‘वकिल किन्नुपर्छ’ भनेर सुनायो । त्यसका लागि १ लाख रुपैयाँ माग्यो । उनले त्यो १ लाख रुपैयाँ पनि दिइन् । तर, वकिल किनियो कि किनिएन भन्ने उनलाई थाहा छैन ।
‘वकिल किन्नुप¥यो, एक लाख चाहिन्छ भनेर मागे, मैले दिएकी छु’, रीताले भनिन् ।
मुखिया गाउँका पूर्णबहादुर केसीको जागिर काठमाडौंको टिचिङ हस्पिटलमा थियो । एउटा सानो पक्की घर थियो । २ छोरा थिए । श्रीमती मीरा तरकारी खेती गर्थिन् । पूर्णले जागिर खाएको १५–१६ वर्ष भएको थियो । राम्रैसँग चल्दै थियो घर परिवार ।
एक दिन शम्भुले पूर्णसँग भेट गरे । आफूसँग धेरै जग्गा भएकाले हदबन्दीबाट जोगाउन पूर्णले सहयोग गरिदिनुपर्ने आग्रह गरे । अनेक तानाबाना बुनेर फकाए । पूर्ण फकिए । शम्भुले पूर्णको नाममा केही जग्गा राख्ने योजना मात्रै सुनाएर फर्किए ।
तर, शम्भुले चागुनारायणको २४ रोपनी जग्गा पूर्णको नाममा पास गरिदिएछन् । यो कुरा पूर्णलाई थाहै भएन । जग्गा पास गर्न पूर्ण मालपोत गएका थिएनन् ।
शम्भु यतिमा रोकिएनन् । उनले पूर्णको नाममा अभिलेख डेभलपर्स नामक कम्पनी खोलिदिए । सोही कम्पनीको नाममा २ करोड २५ लाख रुपैयाँ ऋण झिके । पैसा आफैँले चलाए । कम्पनी दर्ता गर्न, ऋण फाइलमा हस्ताक्षर गर्न र पैसा झिक्न चेकमा पनि पूर्णले हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
यो विषय पनि पाटन उच्च अदालत पुग्यो । अदालतले पूर्णलाई पनि कर्जा अपचलन गरेकोमा दोषी ठहर ग¥यो । पूर्ण पनि अहिले धुलिखेल जेलमा छन् ।
शम्भु केसी प्रकरणको सिकार बनेका अर्का व्यक्ति रामप्रसाद आचार्य हुन् । उनी धुलिखेलको २८ किलो भन्ने ठाउँमा सानो फर्निचर व्यवसाय गरेर बस्थे । बुडोल बस्ने शम्भु केसी पनि मर्निङ वाक गर्दै आउने र त्यही चोकमा चिया खाने गर्थे ।
आचार्यलाई शम्भुको कुरा सुन्दा अचम्म लाग्थ्यो । केसी अर्बभन्दा तलको कुरै गर्दैनथे । फलानोको नाममा यति रोपनी र तिलानाको नाममा उति रोपनी जग्गा पास गराइदिएको कथा सुनाउँथे चिया पसलमा । शम्भुसँग चिया खानेहरूको भीड हुन्थ्यो ।
विस्तारै शम्भुसँग आचार्यको चिनापर्ची भयो । गफगाफ र पेसा, व्यवसायको विषयमा सोधीखोजी हुन थाल्यो । फर्निचर व्यवसाय गर्दा कम्पनी दर्ता गरे नगरेको शम्भुले सोधे । आचार्यले २–३ वर्ष अगाडि सेतीदेवी फर्निचर दर्ता गरेका भए पनि नवीकरण गरेका थिएनन् । उनले शम्भुलाई जस्तो हो, त्यस्तै सुनाए ।
आचार्यको कम्पनी शम्भुले मागे । नवीकरण आफैँले गर्ने भने । कम्पनीको क्षमता वृद्धि गराए । शम्भुले आफ्नै बैंक भएको र सेतीदेवी फर्निचर आफैँले चलाउने प्रस्ताव आचार्यसँग राखे ।
यसो भन्छन् पीडितका परिवार
आचार्यले शम्भुलाई कम्पनी चलाउन दिन आनाकानी गरे । चाहिने भए नामसारी गरेर लानू भने । तर, शम्भुले यसो गरेनन् ।
‘तिम्रा छोरालाई पढ्न विदेश पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । त्यो बेला सम्पत्ति देखाउनुपर्छ । तिम्रै नाममा कम्पनी रह्यो भने तिमीलाई सजिलो पर्छ । अहिले हामीले फर्म चलाउने हो, पछि तिम्रै हुन्छ’, यस्तैयस्तै प्रलोभन देखाएर आचार्यलाई शम्भुले फकाए ।
आचार्य सहमत भए । फर्म आचार्यकै नाममा थियो । यति हुँदा पनि शम्भुलाई सहज भएन । त्यसैले उनले अर्काे कथा बुने ।
क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई त्यो बेला बाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । शम्भुले यो प्रक्रियालाई पनि निजी प्रयोजनमा प्रयोग गरे ।
‘क्यापिटललाई बाणिज्य बैंक बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि हामीले निकै धेरै जनाको हस्ताक्षर गरेर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । तिमीले पनि हस्ताक्षर गरिदेऊ, सजिलो हुन्छ’, शम्भुले रामप्रसादलाई यस्तैयस्तै प्रस्ताव गरे ।
शम्भुले एउटा फाइल नै बनाएर रामप्रसादकहाँ लगे । रामप्रसादले पहिलो पानामा हेरे । त्यसमा शम्भुले भनेजस्तै व्यहोरा उल्लेख थियो । आफ्नो एक हस्ताक्षरले आफ्नै गाउँको, राम्रो चिनजानको, सहयोगी मान्छेले चलाएको फाइनान्स कम्पनी बैंक बन्छ भने किन नगर्ने भन्ने रामप्रसादलाई लाग्यो ।
उनले हस्ताक्षर गरिदिए । फाइलमा थप ९–१० पाना थियो । कुन कुन पानामा के लेखिएको छ भनेर पढ्ने झन्झट रामप्रसादले गरेनन् ।
तर, रामप्रसाद फसिसकेका थिए । उनको त्यो फाइल कर्जाको फाइल थियो । रामप्रसादको सेतीदेवी फर्निचर उद्योगको नाममा शम्भुले ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋण झिके । मुटु रोगी रामप्रसाद अहिले कर्जा अपचलन अभियोगमा धुलिखेल जेलमा छन् ।
श्यामकृष्ण खत्री शम्भुका १३ दिने दाजुभाइभित्रकै ज्वाइँ हुन् । श्याम काभ्रेकै च्यामिङखर्कमा जेसब खाद्य प्रोडक्सन नामक मिल चलाएर बस्थे । उनले १ लाख २० हजार रुपैयाँको लगानीमा पिठो पिस्ने तथा धान कुट्ने मिल चलाएका थिए ।
श्यामको विवाह जयन्ती केसीसँग भएको थियो । जयन्ती शम्भुकै नजिकका १३ दिने भाइकी बहिनी थिइन् । र, श्याम पेसाले वकिल पनि ।
शम्भुका सानातिना कानुनी काम श्यामले गरिदिन्थे । जग्गा पास गर्ने कागजपत्र मिलाउने, सम्बन्धित व्यक्ति भेटेर हस्ताक्षर गराउनेलगायतका काममा श्यामको संलग्नता हुने गथ्र्याे ।
शम्भुले श्यामलाई पनि छाडेनन् । श्यामको जेसब खाद्य प्रोडक्सनको क्षमता बढाए । ठूलो उद्योग जस्तो बनाए । र, श्यामकृष्ण खत्री प्रोपाइटर रहेको जेसब खाद्य प्रडक्सनको नाममा ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण झिके, आफैँले चलाए । बैंक ऋण अपचलनको अभियोगमा श्याम पनि अहिले धुलिखेल जेलमा छन् ।
‘श्यामकृष्ण खत्रीको विहेमा शम्भुले ३ अञ्जुली पानी खाएको छ, आफ्नै बहिनी पर्ने भएकाले गोडा धोएको छ, शम्भुले ज्वाइँजति कोही बाँकी राखेनन्, सबैलाई जेल हालेका छन्’, अचेल स्थानीय यसै भन्छन् ।
जयन्ती शम्भुकै नजिककी नाता पर्ने बहिनी हुन् । र, अहिले जेलमा रहेका श्याम खत्रीकी श्रीमती । राज्यका नजरमा जयन्ती अहिले फरार छन् । जयन्तीको नाममा दर्ता रहेको बुढामहांकाल खाद्य उद्योगको नाममा शम्भुले ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण झिकेर चलाए ।
ऋण अपचलनको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतले जयन्तीलाई पनि जेल सजाय सुनाएको छ ।
तर, शम्भुले जयन्ती र श्याम खत्रीलाई भने ढाँटेको होइन । उनीहरू दुवै जनालाई शम्भुको योजना र गरिरहेको काम थाहा थियो । आफ्नै दाजु र जेठानलाई सजिलो पर्छ भने उनले भनेको किन नमान्ने भन्दै श्रीमान्–श्रीमतीले नै शम्भुलाई साथ दिँदै आएका थिए ।
मधुकर महत पनि शम्भु केसीका भान्जे ज्वाइँ नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । मधुकर बनेपामा नै लक्ष्मी ह्याचरी संचालन गरेर बस्थे ।
मधुकरले ३ सय चल्ला हालेर ह्याचरी सुरु गरेका थिए । शम्भु पनि सुरुमा कुखुरा व्यवसाय नै गर्थे । शम्भुले नै मधुकरलाई चल्ला दिने गर्थे । मधुकरले आफ्नो ह्याचरीमा ९–१० हजार प्यारेन्ट पाल्न थालेका थिए ।
नाता ज्वाइँ–ससुराको भए पनि शम्भु र मधुकर व्यवसाय जोडिएका व्यक्ति पनि थिए । २०५६ सालमै शम्भुले आफ्नो जग्गा धेरै भएकाले हदबन्दी लाग्ने भन्दै मधुकरको नाममा ललितपुरको छम्पीमा रहेको ३० रोपनी जग्गा पास गराएछन् ।
२०६७ सालमा मधुकरलाई आफ्नै व्यवसाय विस्तार गर्न मन लागेछ । उनले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) बैंकमा कर्जा लिन निवेदन दिएछन् ।
मधुकरको व्यवसाय राम्रो थियो । धितो पनि थियो । एनसीसी बैंकले उनलाई ऋण दिने संकेत गरेछ । ऋण लिने प्रक्रियाका लागि मधुकर एनसीसी बैंकको शाखामा गएछन् ।
ऋण दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्दै थियो । एनसीसी बैंकका कर्मचारीले कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण हेरेछन् । विवरण हेर्दा मधुकरले ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको फेला परेछ ।
अनि पो मधुकर छाँगाबाट खसेजस्तो भएछन् । तर, विकल्प थिएन । शम्भुलाई भेटेर गुनासो गरे । उनले २०६७ को जेठमा यो कुरा थाहा पाएका थिए । शम्भुले असार मसान्तभित्रमा सल्ट्याइदिने बचन दिए । मधुकरले विश्वास गरे ।
तर, शम्भुले ऋण तिरिदिएनन् । ऋण अपचलनको अभियोगमा पाटन उच्च अदालतले उनलाई जेल सजाय सुनायो । मधुकर अहिले धुलिखेल जेलमा छन् ।
शम्भुले धमुकरकै लक्ष्मी ह्याचरीको नक्कली कागजपत्र पेस गरेर आफैँले ऋण लिएका रहेछन् । मधुकरको नाममा झिकिएको ८ करोड ५० लाख ऋणका लागि छम्पीको ३० रोपनी जग्गासहित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेको १ सय २४ रोपनी जग्गा धितो राखिएको छ । तर, कसको नामको र कहाँको जग्गा राखिएको हो भन्ने मधुकरलाई थाहा छैन ।
माथि उल्लेख गरिएका सबै ‘ऋणी’विरुद्ध पाटन उच्च अदालतले २९ वैशाख २०७१ मा फैसला गरेको हो । ३१ वैशाख २०६९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले शम्भु केसीसहितका उल्लिखित व्यक्तिहरूविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । पाटन उच्च अदालतले फैसला गर्दै केसीसहितका केही व्यक्तिलाई दोषी करार गरेको छ भने केहीले सफाइ पाएका छन् ।
मुखिया गाउँको पीडा– १: बैंकिङ कसुर अभियोगमा सिंगो गाउँ जेलमा
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर १६, २०७६, ०८:०६:००